Budata Yik Yak Apk Maka gam akporo [ngwa kacha ọhụrụ] - Luso Gamer
Na mbụ mgbe ndị mmadụ enweghị ohere na teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ndị mmadụ na-enwe mmasị ide na ịgụ ozi na-amaghị aha n'elu mgbidi enweghị usoro maka ikwupụta mmetụta ha. Otú ọ dị, na-aga n'ihu na echiche na echiche maka ọgbọ ọhụrụ. Ndị mmepe haziri Yik Yak Apk.
N'ụzọ bụ isi, a na-ekewa ngwa a n'etiti nyiwe ịntanetị na-elekọta mmadụ. Ebe ndị mmadụ nwere ike ịgụ gbakwunyere na-aghọta ibe ha echiche na mmetụta na-agụ mgbidi ọdịnaya. Agbanyeghị, oge a ga-edobe profaịlụ na onye mbipụta ya na nzuzo.
Nke a pụtara na edobere ebe onye mbipụta na ozi ndị ọzọ na nzuzo. Naanị onye mbipụta nwere ike gbanwee ma kwe ka ịnweta ozi bụ isi. Ọ bụrụ na ị dị njikere isonye na nke ọhụrụ a Obodo ịkparịta ụka wee wụnye Yik Yak Download n'ime smartphone.
Kedu ihe bụ Yik Yak Apk
Yik Yak Apk bụ ngwa android metụtara netwọkụ mmekọrịta n'ịntanetị. Ebe a na-ahapụ ndị otu na ndị debanyere aha ka ha bipụta gbakwunyere na-agụ ọdịnaya mgbidi enweghị usoro n'ịntanetị. Na ọbụna na-enwe ekele maka ọrụ ha na-enye nkwado.
Dị ka anyị kwuru na mbụ na echiche nke ngwa a na-emegharị naanị site na nka ochie a. Ebe e mere mgbidi enweghị usoro maka ide na igosipụta mmetụta. N'ụdị ọdịnaya ma ọ bụ foto.
Nke pụtara na ọ bụ naanị ụfọdụ ndị mmadụ bi n'otu radius nwere ike ịgụ ọdịnaya. Ọ na-atọkwa ụtọ ịde nkọwa ndị ọzọ na-egosighi njirimara ha. A na-ewere usoro a na-atọ ọchị ma na-atọ ụtọ.
Ugbu a ndị mmadụ nwetara teknụzụ ọhụrụ. Ebe onye ọ bụla na-ejide smartphone android kacha ọhụrụ dị ka akụrụngwa dị mkpa. Ma na-elekwasị anya na ebumnuche na mmekọrịta ndị obodo, ndị mmepe guzobere Yik Yak App ọhụrụ a.
aha Yik Yak
Mmepụta Yik Yak
Aha ngwugwu com.yik.yak
Nke bụ free download si ebe a na-achọghị ndebanye aha. Ọzọkwa, ngwa agaghị amanye onye ọrụ itinye akwụkwọ maka ndebanye aha ọ bụla. Ndị ọrụ ngwa nwere ike ịnweta dashboard isi na mgbidi na-enweghị ikike ọ bụla.
Na mgbakwunye, a ga-edobekwa njirimara onye bipụtara ya na nzuzo. Ihe mere e ji nye iwu nzuzo ndị a siri ike bụ ka e chebe onye nkwusa ka ọ ghara ime ka ndị mmadụ ghara ịna-eme ihe. N'ihi na ụfọdụ ndị nwere ike ịchụso ọdịnaya na-adịghị mma.
Ọzọkwa idebe amachibidoro njirimara ga-enyere aka ịkwalite obi ike ndị ihere. Cheta echiche a machibidoro iwu na-amụbakwa mmasị izute onye nkwusa ha kacha amasị. Ma rịọkwa ka enyere ebe ahụ aka.
Ịkwado ebe ahụ ga-enyere ndị ọzọ aka ịchọta onye bipụtara ya. Ndị na-amasị ọdịnaya mgbidi nwere ike ịghọta ndị ọzọ na-enye nkwado. Enwere ike iru nhọrọ nleba anya maka akara ọjọọ yana ọdịnaya ebipụtara.
A na-ahapụ ndị ọrụ ka ịhazigharị radius wee kpachie ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ iji nweta ọdịnaya. Nke a ga-enyere aka ịnweta naanị ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị. Ọ bụrụ na ị hụrụ echiche ahụ n'anya ma dị njikere ịkesa echiche na echiche wee budata Yik Yak Maka gam akporo 2022.
A na-agbakwunye nhọrọ pro dị iche iche.
Nke ahụ gụnyere Location na Radius adjuster.
Nhọrọ nkekọrịta ozugbo.
Iji kwupụta mmetụta na mmetụta uche.
Enwere ike iru nhọrọ elu Vote na Down.
A ga-echekwa data ewepụtara n'elu sava nkeonwe.
A na-eji nzuzo nzuzo dabere na ndị agha.
Achọrọ njikọ ịntanetị kwụsiri ike maka ịnweta mgbidi.
Otu esi ebudata Yik Yak Apk
N'ebe ahụ, ọtụtụ weebụsaịtị na-ekwu na ha na-enye faịlụ Apk ndị yiri ya n'efu. Ọbụna ngwa ahụ nwere ike ịnweta site na Ụlọ Ahịa Play. Agbanyeghị, ugbu a ngwaahịa anaghị enweta ya n'ihi ụfọdụ nsogbu. Yabụ kedu ihe ndị ọrụ android kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otú a?
Ọ bụrụ na ị dị njikere isonye na obodo ọhụrụ a. Ma enweghị ike ịchọta ebe echekwara iji budata ụdị faịlụ Apk kachasị ọhụrụ. Ga-aga na webụsaịtị anyị wee nweta ụdị faịlụ ngwa ọhụrụ n'efu site na iji otu nbudata nhọrọ nbudata.
Faịlụ ngwa anyị na-egosi ebe a bụ nke izizi. Ọbụna tupu ịnye Apk n'ime ngalaba nbudata. Anyị etinyelarị ya na ekwentị dị iche iche. Mgbe wụnye ngwa anyị hụrụ na ọ dị mma iji. Ọzọkwa, ndị ọrụ nwere ike ịhazigharị radius na-elekwasị anya na nzuzo nke onwe.
Enwere nzikọrịta ozi na ngwa metụtara ọha ndị ọzọ ebipụtara. Nke zuru oke n'inye ụzọ a echedoro maka ịkekọrịta na igosipụta mmetụta. Iji nyochaa faịlụ Apk ndị ahụ biko soro njikọ ndị enyere Salsa Live Apk na Woo Live Apk.
Ọ bụrụ na ị na-eche naanị gị ma nwee mmasị ịgụ mgbidi na-enweghị usoro nke nwere ọdịnaya nwere echiche. Mgbe ahụ, anyị na-akwado ndị ike gwụrụ ndị wụnye ọhụrụ Yik Yak Apk n'ime ha smartphones. Na-anụ ụtọ ịbụ akụkụ nke obodo ọhụrụ a na-ejide nzuzo siri ike.
Categories Social, Apps Tags Ngwa ịkparịta ụka, Yik Yak Apk, Ngwa Yik Yak, Yik Yak Download, Yik Yak maka gam akporo 2022 Mail igodo